राजधानीका सडकमा जम्ने पानी व्यवस्थापनको जिम्मा कसको?
वर्षातको पानीले छोपिएको नालामा शुक्रबार एक जना स्कुले बालिका डुबेको भोलिपल्ट खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले ट्विट गरे- 'अव्यवस्थित अनियोजित सहरको वर्षातको बेला बेहाल हुन्छ नै। नेपालमा वर्षातको पानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको कुन निकायको हो अझै ठेगान छैन।'
सरकारको एक जिम्मेवार पदाधिकारीले यसरी सार्वजनिक रुपमै वर्षातको पानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय टुंगो नभएको बताएपछि प्रश्न उठ्छ- आखिर यो जिम्मेवारी कसको हो त?
हामीले आइतबार यही प्रश्न उनै सचिव उपाध्यायलाई सोध्यौं।
'हामीकहाँ विकास निर्माणका काम तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न भए। यसले गुणस्तरभन्दा सस्तोमा गर्ने चलन स्थापित भयो। खानेपानी, बाटोजस्ता काम पैसा कमाउनलाई गरिँदै आएको छ जसले गुणस्तर भएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले ट्विटरमा त्यही भन्न खोजेको हो। सहरमा डुबानको समस्या छ, त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो कि खानेपानीको हो कि ढलको हो कि सहरी विकासको हो? त्यसको ठेगान छैन भन्या हो।'
'आखिरमा त त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। खानेपानी र सरसफाइबारे हामीले बल्ल नीति बनाइरहेका छौं जुन मस्यौदाकै चरणमा छ,' उनले भने।
खानेपानी आयोजना भएका ठाउँमा संकेत चिह्नहरु राखेको जानकारी दिँदै उनले दुर्घटना भएका ठाउँमा नभएको भए ती कारबाहीको दायरामा पर्ने उनले बताए।
'जहाँसम्म तारकेश्वर नगरपालिका र सामाखुसीमा सडकको ढलमा डुबेर बच्चाबच्ची मरेको वा घाइते भएको भन्ने छ, तारकेश्वरमा त त्यहाँको स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, मेरो मन्त्रालयको त्यसमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध र जिम्मेवारी छैन। हो नैतिक जिम्मेवारी भने छ। सामाखुसीमा भने सडक ड्रोनको कारणले हो। बच्ची नै त्यस्तो खतरा ठाउँबाट हिँड्यो। उसलाई यताबाट हिँड्नु हुन्न भनेर सडक विभागले यस्ता चिह्न राखिदिनुपर्थ्यो। चिह्नको अभावले यस्तो घटना भयो,' उनले भने।
सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल भने आफ्नो निकायको मात्र दोष मान्न तयार छैनन्।
'खासमा सडकमा पर्ने पानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, तर काठमाडौंका सडकमा ढलको पनि पानी मिसिन्छ, अब ढलको निकास गर्ने काम त हाम्रो भएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सामाखुसीमा पनि ढलको पानी जमेर नै नाला नदेखिने भएको हो।'
महानिर्देशक सिग्देल यस्तो घटना हुनुमा राज्यका सरोकारवाला सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको स्वीकार्छन्। 'यसमा महानगर र ढल निकास बढी जवाफदेही हुनुपर्छ,' उनले भने, 'बर्खामा कान्तिपथ लगायत क्षेत्रमा पानी जम्न नदिन पनि तिनै निकायको जिम्मेवारी बढी हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १, २०७४, ०४:५७:१७